काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले नेपाल सिक्किम बन्न सक्ने भनी संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा दिएको अभिव्यक्तिबारे संसदमा बोलेका छन् ।
आफूले समितिमा विश्लेषण नभइ प्रश्न गरेको दाबी गर्दै गिरीले संसदमा समय पाए आफ्नो भनाइको पक्षमा १५ मिनेट तर्क पेश गर्ने बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा कुटनीतिका सिद्धान्त र ज्ञानका आधारमा नभइ किताबमा बढेको आधारमा बोलेको थिए ।
सभामुखले कृपा गर्नुभयो भने म यस विषयमा १५ मिनेट लगाएर आफूले भनेको कुराको समर्थनमा तर्क पेश गर्छु,’ प्रतिनिधि सभाको सोमवार बसेको बैठकको विशेष समयमा गिरीले भने, ‘प्रश्न थियो, विश्लेषण थिएन, जुन प्रकारले सरकार चलाउनु भएको छ, कुटनीतिलाई नबुझि प्रचारसँग मिसाउनुभयो भने नेपालको भाग्य पशुपतिनाथको हातमा छ भनेको थिए ।’
केही दिनअघि संसदीय समितिमा गिरीले ‘भारतले कश्मीर खाएको छ, सकेको दिनमा उसले नेपाललाई सिक्किम बनाउने छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
गिरीले बलभद्र थापा र अमरसिंह थापाले बन्दुक बोकेको समय नभई कुटनीतिमा आएको डिजिटल क्रान्तिको युगमा वामपन्थी लप्फाजीमा नलाग्न आग्रह गरे ।
परराष्ट्रन्त्रीको जवाफ तोलेबोली सिकेको बालकको जस्तो !
नेता गिरीले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक निरर्थक भएको टिप्पणी गरे ।
‘प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकको विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो । त्यो जानकारी सुनेर गदगद भएर मोहित भएर निस्केपछि साँझपख आयोगको बैठक सम्बन्धमा परराष्ट्रको विज्ञप्ति पढ्न पाए, त्यो २ वटाको निष्कर्ष पढ्दा बैठक निरर्थक भएको लाग्यो । माननीयहरूलाई सम्झना होला कालापानी, लिपुलेक सुस्ताको बारेमा कुरा उठायौ भन्नुभएको छ । १९५९ को सन्धीको पुनरावलकोका लागि सचिव स्तरीय संयन्त्र बनायौ भन्नुभएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले छापेको वक्तव्यमा त्यो छैन ।’
नेता गिरीले राजनीतिक समीकरण बदलिएको समयमा पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाई तोते बोली सिक्दै गरेको बालकको जस्तै भएको टिप्पणी गरे ।
‘देश बदलिएको छ, सरकार बदलिएको छ, दुईतिहाइको सरकार छ । हिन्दूस्तानको सरकारका त विभिन्न आयाम छन्,’ गिरीले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई २ वर्षको तोते बोलीजस्तै छ, उही शव्द दोहोर्‍याउने क्रममा हात्तीहात्ती भनेजस्तै, सधै लिपुलेक, सुस्ता, कालापानी र १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन । पुनरावलोकन गर्न कसले रोकेको छ ? कालापानी भाषण गरेर फिर्ता हुन्छ ?’
आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष तिम...